Presidential Elections: Ụlọikpe akụpụla ikpe na Buhari agụrughị akwụkwọ ịbụ onyeisiala - BBC News Ìgbò
Presidential Elections: Ụlọikpe akụpụla ikpe na Buhari agụrughị akwụkwọ ịbụ onyeisiala
12 Julaị 2019
Akụkọ kachasị dị mkpa n'ụbọchị Fraide, abalị iri na abụọ nke ọnwa Julaị:
Uloikpe akụpụla ikpe na Buhari agụrughị akwụkwọ ịbụ onyeisiala
Image copyright MBuhari
Ụlọikpe Mkpegharị dị n'Abuja nọrọ n'ụbọchị Fraide kụpụ n'akụkụ, akwụkwọ a gbara na-ekwu na Buhari agụrughị akwụkwọ ịbụ onyeisiala na ntuliaka 2019.
Na mkpebi ụloikpe nke ọkaikpe atọ n'isi ya Jọstis Mohammed Idris kwuru na a gbara akwụkwọ ahụ mgbe ọ gaferela oge kwesịrị ka e weta ya bụ okwu n'ụlọikpe nke bụ abalị iri na anọ.
Kalu Kalu, Labaran Ismail and Hassy El-Kuris gbaburu akwụkwọ n'ụlọikpe ukwu dị n'Abuja iji gbaghaa na Buhari etozughị ịbụ onyeisiala. mana ụlọikpe ahụ kụpụrụ ya, ha were gbagharịa akwụkwọ ahụ n'ụlọikpe mgbegharị.
N'aka nke ọzọ,
"Ezipụrụm mpụtara ntuliaka gaa 'server'"
Onye ọrụ Inec ọzọ agbaala akaebe na ya zigara mpụtara ntuliaka 2019 na 'server' n'oge ntuliaka onyeisiala Naijiria e mere n'ọnwa Febuwari afọ 2019.
Olufemi Ogunride, onye so na ndị ọrụ ngo Inec jiri rụọ ọrụ kwuru na "Ihe m ma bụ na presiding Officer wetara akwụkwọ EC8C Form nke m lere anya were debanye akara site n'igwe 'card reader' banye na 'server'."
Cheta na otu pati PDP rịọrọ ụlọikpe arịrịọ ka e nye ha ikike inyocha 'server' dịka ha na-ebo ebubo na Inec nwogharịrị mpụtara ntuliaka 2019 iji nye Buhari mmeri.
'Nyeenu UNN nkwado imepụta ụgbọala latrik n'ụbara'
Image copyright Ozoemena Ani
Otu jikọrọ ndị ntorobia n'Ọwụwa-Anya a kpọrọ 'Coalition Of South East Youth Leaders' akpọkuola gọọmenti etiti ka ha nye mahadum 'University of Nigeria Nsukka' nkwado ego iji emepụta ụgbọala latrik na-enye ọkụ n'ụbara.
Mbeku a na-esote mmepụta ụgbọala latrik na-enye ọkụ nke Engineering Department nke mahadum ahụ mepụta na nsonso a.
Media captionElectric Keke: Ụkọ mmanụ ụgbọala mere m ji arụ Keke - Ifeanyi
Mbeku ahụ dị n'akwụkwọ ozi otu ahụ zitere BBC Igbo ụbọchị Fraide nke onyeisi ha bụ Goodluck Egwu Ibem binyere aka.
Ha rụtụrụ aka mkpa ọ dị ka gọọmenti kwado mahadum na imepụta ụgbọala ahụ ka o juo eju bara abara na Naijiria nakwa maka mbupụ na mba ndị ọzọ.
Media captionLee Alex Nwa-Ephraim Akwaiwu nwa afọ Igbo na-arụ ụgbọala
Ha kpọkwara oku ka gọọmenti etiti nye mahadum'University of Nigeria Nsukka' ohere inwe ngalaba 'Chemical Engineering.'
"Na Naijiria e nwere mahadum ọkaibe nke mpaghara atọ; 'University of Lagos'(Unilag), 'Ahmadu Bello University' (ABU) na
"University of Nigeria Nsukka(UNN). Nke UNILAG na ABU na-akụzi Chemical Engineering mana e nyeghị UNN ohere ịkuzi Chemical Engineering."
"Ihe ọbụla bụ ihe kpatara nke a, anyị na-akpọku gọọmenti ka onye ohere ka mahadum a bido kụziwe 'Chemical Engineering' iji kwado ọganihu teknụzụ na Naijiria."
Ogbunigwe egbuola mmadụ itoolu gụnyere nwatakịrị
Ihe ọjọọ mere n'ofesi dịka ndị omekataraihepụọụjọ yinyere nwatakịrị ogbunigwe gburu mmadụ itoolu na mpaghara Nangarhar dị na mba Afghanistan.
Ihe a mere ebe a gara agbamakwụkwọ merụkwara mmadụ iri na abụọ ndị ọzọ ahụ.
Ihe mere n'ogige Pati PDP
Akụkọ si n'ọnụ Ọkaiwu Livy Uzoukwu bụ onye du ndị ọkaiwu otu pati People Democratic Party (PDP) na-akọwa na ndị obu egbe wakporo ndị kwesịrị ịgbara Atiku Abubakar na Peter Obi akaebe n'ụlọikpe.
PDP sị na ihe a mere ka Ọkaikpe Mohammed Garba yiharịa ụbọchị ikpe ha ruo Monde bụ ụbọchị iri na ise nke ọnwa a.
Ndị Shịa nọ ụlọikpe
Ndị uweojii Naịjirịa akpụpụla mmadụ iri isii na ise bụ ndị otu ofufe Shịa ụlọikpe dị n'Abuja maka ebubo mwakpo, ịkpa nkata mpụ nakwa ịgbakọ n'ụzọ ezighi ezi.
A nwụchiri ha mgbe ha na-eme ngagharịiwe maka onyeisi ha bụ Ibrahim El-Zakzaky gọọmentị etiti Naịjirịa ji eji.
Griezmann agaala Barcelona
Ndị na-akwado Barcelona amalitela ịkpa nganga dịka ndị isi ha gotere Antoine Griezmann.
Griezmann so ndị France bulie Iko Mbaụwa n'afọ 2018 abụrụla onye isii ego e ji zụọ ya kacha dị ọnụ n'ụwa, dịka Barcelona kwụrụ paụnds otu nde narị na asaa iji gote ya.
Ụnụ akwanyela m ọkụ n'ike
Image copyright Instagram/Bayo Omoboriowo
Nkenke aha onyonyo Muhammadu Buhari
Onyeisiala Muhammadu Buhari ekwuola na nnukwu ọkụ dị ya n'ike ugbua maka ịhọpụta ndị mịnịsta ga-eso ya rụọ ọrụ.
Buhari kwuru nke a oge ya na ndị omeiwu ụfọdụ riri nri abalị ụnyaahụ n'Aso Rock dị n'Abuja.
Ọ kọwara na ihe o ji dị ka ọ na-egbu oge ịhọpụta ndị mịnịsta bụ maka na ọ chọrọ ịhọrọ ndị ọ ma n'onwe ya na-abụghị ndị pati ya bu APC ga-ahọpụtara ya.
A na-ele anya na Buhari ga-ewepụta aha ndị ga-eso ya rụọ ọrụ dịka Minista.
Lebanụ anya na nkwekọrịta confrensị 2014
Nkenke aha onyonyo Goodluck Jonathan kwuru na oge adịghịrị ya itinye nkwekọrịta confrensi 2014 n'ọrụ.
Aka chịburu Naijiria bụ Goodluck Jonathan ka na-ekwusi ike na nsogbu Naijiria niile ga-ala kpam kpam ma ọ bụrụ na e mee ihe niile ekwekoritara na ọgbako confrensi nke 2014.
Jonathan kwuru nkea n'otu ọgbakọ na Legọs unyaahụ bụ abalị iri na otu nke ọnwa Julaị.
Ọ kọwara na mgbe emechara ya bụ ọgbakọ na 2014, oge adighịrị ya iji tinye nkwekọrịta ndị ahụ n'ọrụ n'ihi na oge ntuliaka atụnyela n'ụkwụ.
Trump agbaala isi akwara
Nkenke aha onyonyo A na-atụ egwu na Trump nwere ike iji atụmatụ ọgụgụ ọnụ 2020 wee mee nrụrụaka mgbe ntuliaka ga-ebido
Na mba ofesi, Onyeisiala mba Amerika bụ Donald Trump ekwuola na ọchịchị ya ga eso ụzọ ọzọ iji chọpụta mmadụ ole bi na Amerịka bụ ndị si mba ọzọ wee bịa.
Ụlọikpe ukwu Amerịka machiri Trump itinye ajuju gbasara obodo mmadụ si mgbe a ga-eme ọgụgụ ọnụ nke afọ 2020.
Mana Trump na ndị pati ya bụ 'Republicans' kwuru na ha ga-esi ụzọ ọzọ wee nweta ọnụọgụgụ ndị mbiara mbiara ole bi n'Amerịka maka na ahụghị ka e mere, e mee ka a hụrụ.
Naijiria na Ọljiria
Nkenke aha onyonyo Samuel Chukwueze nke Naijiria na Riyad Mahrez nke Ọljiria
N'egwuregwu bọọlụ, ọ ga na-ada "jiria jiria" ụbọchị ụka mgbe Nijiria ga-ezute Ọljiria n'agba abụọ nke ikpeazụ nke asọmpị iko mba Afrịka.
Mba Ọljiria jiri ọkpụ goolu penariti anọ asatara atọ wee dulaa ndị Aịvọrị Kost ụnyaahụ.
Iji wulite mmụọ ha, ndị ogaranya abụọ bụ Aliko Dangote na Femi Otedola ekwela ndị Super Eagles nkwa ibunye ha ego n'ụkpa ma ha merie ya bụ asọmpi.
Mba Senịgal ga-ezute ndị Tunisia na asọmpi 'semi-final' nke ọzọ.
Algeria na Nigeria ga-agba egwu onye ike ga-agwụ
Aka uweojii akparala nwoke gbara nwa nwanne ya egbe n'Imo
'Ogbugbu mmadụ dị elu na Saụt Afrịka'
Alex Iwobi gbara ndị akụkọ ụgha n'anwụ